बागलुङमा निर्वाचनको तयारी तीब्र : १ सय ३ मतदान स्थलहरु मध्य ४१ स्थल संवेदनशील ! – ebaglung.com
बागलुङमा निर्वाचनको तयारी तीब्र : १ सय ३ मतदान स्थलहरु मध्य ४१ स्थल संवेदनशील !
२०७४ कार्तिक २३, बिहीबार ०८:११	Home Slider, Top News, अन्य समाचार, प्रमुख समाचार
बागलुङ २०७४ कात्तिक २३ । बागलुङ जिल्लामा पहिलो चरणमा मंसिर १० गते हुने प्रतिनिधी तथा प्रदेश सभा सदस्य पदको निर्वाचनको तयारी तीब्ररुपमा भैरहेको छ । निर्वाचनको लागि मतपत्रहरु सदरमुकाम ल्याई पुराई सकिएको छ भने मतदान केन्द्रहरुमा आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था मिलाईएको छ ।
बागलुङ जिल्लामा १ सय ३ मतदान स्थल रहेका छन्भने १ सय ९९ सय मतदान केन्द्र रहेका छन् । मतदान केन्द्रहरुको सुरक्षाका लागि विगतका चुनावमा भएका गतिबिधि, भौगोलिक बिकटता, सञ्चार, यातायात सुबिधाको पहुँच लगायतका आधारमा संवेदनशिल मतदान स्थलको पहिचान गरि आवश्यक सुरक्षा योजना तयार पारिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णुबहादुर थापाले जानकारी दिएका छ ।
जिल्ला सुरक्षा समितिले संवेदनशील मतदान स्थलको लागि बिशेष सुरक्षा योजना तयार पारेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी थापाले बताएका छन् । जिल्ला सुरक्षा समिति बागलुङले ४१ वटा मतदान स्थललाई संवेदनशील क्षेत्रको सूचिमा राखेको छ ।
निर्वाचन सुरक्षाका लागि नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेनाको अतिरिक्त म्यादी प्रहरी परिचालन गरिने छ । अहिले म्यादी प्रहरीको तालिम संचालन भैरहेको छ । बागलुङमा १ लाख ६७ हजार २ सय ८२ जना मतदाता रहेका छन् ।
बामगठबन्धनका उम्मेद्धारहरुले भने, फलामखानीको उत्खनन् कार्य अगाडी बढ्छ !